Probiotics, prebiotics, amalungiselelo ukuze ukubuyiselwa microflora emathunjini - kokubili mass engakutholi elahlekile bese ukhethe imithi ukuthi yini wena okudingeka uyenze? Ezimweni eziningi, umuntu owayeyisazi ndaba amaphutha. Nokho, lesifanele okuningi ukuze ubheke onguchwepheshe bese uthole aphoyintimenti ezifanele. Lesi sihloko uzokutshela mayelana nemithi "Atsidolak". Umyalelo, indlela isicelo futhi abanye ulwazi olwengeziwe izokwethulwa ukunakwa kwakho.
Ukwakheka ukulungiselela kanye nencazelo
Mayelana nomuthi "Atsidolak" manual uthi lisho izithasiselo eziphila abakhuthele. Siqukethe izinhlobo ezimbili nama-bacterium awusizo e esilinganayo. Le nhlanganisela afanelekile kakhulu ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwezifo of pheshana emathunjini.
Lactobacilli nomthelela ukuqedwa nezilwanyana ezincane pathogenic, abasusa wonke amagciwane ayingozi. Bifidobacteria ukuvikela izingxenye engenhla ipheshana wokugaya ukudla kusuka kunqotshwa kwazo. Izingxenye eziyinkimbinkimbi alawule ukugaya, ekuqedeni eziningi izimpawu ezingezinhle.
abathengi abaningi bathatha izindlela zabo "Atsidolak". Imiyalelo emuthini kwakufanele uzifunde ngokucophelela. Uma indlela yokwakheka udokotela, ungaqiniseka of choice lesifanele. Abstract emuthini kusikisela izimpawu ezilandelayo, lapho okufakiwe isetshenziswa:
ukuvuvukala esiswini namathumbu;
ukwephulwa sezinyawo (ukuqunjelwa, ukubuyisa, ukukhishwa isisu);
dysbiosis of omsakazo ezihlukahlukene;
ukwelapha izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane esiswini (ngokuvamile lihambisana namanye kwayo);
Yokutakula kwamaphilisi, ngelashwa nangemithi nokunwetshiwe;
ukusabela nomzimba (kuhlanganise ukudla nemithi).
I nomuthi "Atsidolak" kungase kudingeke isicelo njengoba prophylactic. Lenza kahle nezinye izingxube zamakhemikhali eziningi. Nokho, ngaphambi inhlanganisela yemithi kuyadingeka ukubonana nodokotela asikisele.
Mayelana imithi 'Atsidolak "manual lithi kahle ikubekezelele zonke iziguli kuncike ulapha kanye umthamo schedule. Nokho, noma yimuphi izidakamizwa has Izimo yayo. Ukwakheka Okubukwe kwaba okufanayo.
Umuthi alisetshenziswa ezinganeni ezincane ngaphandle izincomo ezifanele. Contraindicated ukunikeza izidakamizwa izingane azifinyelelanga iminyaka emibili. Ithuluzi akukashicilelwa iziguli amathuba wokuthuthukisa umzimba wakho uxabana ne kwenye yezingxenye. Kulesi simo kungcono ukukhetha izidakamizwa esikhundleni "Atsidolak" (analogue).
Ngaphambi kokufaka isicelo imithi udinga ukuvula sachet futhi uthele okuqukethwe. Umuthi siphela emanzini noma yimuphi umkhiqizo ubisi. Ungakwazi ukwengeza izidakamizwa iyogathi liquid noma ijusi. Umthamo zomuthi incike qembu lobudala.
Kuye uhlobo zokugula, izingane ezineminyaka engu-2 kuya ku-12 esabelwa iphakethe kwezinsuku ezingu-1-2 kabili. Ekwelapheni ezinzima iguliswa ukusabela nemibandela ukulungiselela lingasetshenziswa kuze kube kathathu ngosuku. Iziguli sebeneminyaka engu-12 kanye nabantu abadala ebekiwe kusuka 1 kuya 3 amaphakheji kathathu ngosuku. Isikhathi yokwelapha kumele kusungulwe onguchwepheshe. Ngokuvamile ayidluli amasonto amathathu. Njengoba isilinganiso izifo ukwakheka isetshenziswa amasonto amabili.
Abathengi e iningi weneliseka ukwelashwa. Nokho, ezinye iziguli ukuthi lesi sidakamizwa "Atsidolak" intengo iphezulu kakhulu. Omunye iphakethe, okuyinto amaphakethe 10 izobiza ruble 600-800. Konke kuncike iphuzu ekhemisi nesifunda ohlala kulo.
Nokho, ochwepheshe bathi lokhu imithi kuwufanele imali. Ngemva umphumela ukwelashwa iba obonakalayo phakathi nezinsuku ezimbalwa. Iziguli setha esihlalweni njalo, ukuthola ukugaya engcono, ukungakhululeki iphele. Futhi imithi ngezinga elithile kuthuthukisa amasosha omzimba. Phela, nama-bacterium awusizo ukusiza ukuqeda amagciwane nezinto ezincane eziphilayo ezimbi.
Umuthi kunobuciko emnandi. Ubulula okusobala sokusebenzisa kungenzeka ithuba exutshwe imikhiqizo ehlukene. Kuleli fomu kulula kakhulu ukunikeza izidakamizwa ezinganeni. Ukwakheka kuyakhethwa ngendlela yokuthi ivala isikhala yokuntuleka nezilwanyana ezincane ezuzisayo esiswini. Imithi ukwesekwa microflora ibhalansi phakathi emathunjini ezincane nezinkulu.
Abanye abathengi bathi ezinsukwini zokuqala zokwelashwa ziye zenzeka ukukhuphuka kancane ukubuyisa. Odokotela futhi ukubika ukuthi lesi akusona isizathu sokuba ukuqedwa. Konke evamile ezinsukwini ezimbalwa.
Thenga imithi kungaba ngesimo amaphilisi chewable intsha. Nokho, lolu hlobo lwemithi kunzima kakhulu ukuthola. Umuthi itholakala ngesimo chewable ushokoledi namabhere. Izingane ngenjabulo ukuthatha imithi enjalo.
Uyazi ukuthi "Atsidolak" intengo izidakamizwa. Imiyalelo kanye indlela usebenzisa njengoba ethulwa ukunakwa kwakho. Uma ukungabaza ngokunemba amkhethile ke xhumana nodokotela. Udokotela uyosingatha ezinye izivivinyo, imiphumela okuzokwenza linqume izidakamizwa ikakhulukazi uma kunesidingo. Uma ngemva kwesonto ukwelashwa ungazizwa kangcono, kanye ukubukeka izimpawu ezengeziwe ezingemnandi kufanele ngokushesha ufune usizo lwabezokwelapha. Isekela umsebenzi amathumbu akhe, uhlale unempilo!
Sophora japonica futhi isebenza imithi yesimanje
"Avodart": imfundo amazwana. "Avodart" (amaphilisi): Inani
Amakhandlela Bheka kusukela hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa
Ingabe bodybuilders imithi 'potassium Orotate'? Umhlahlandlela uthi: 'Cha!'
"Liana, Suzuki": ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukungena "BIOS" futhi likwazi ukwenza izinguquko ezidingekayo
Yini umbala is kuhlangene pink - amathiphu ambalwa